Vaovao - Tongasoa ireo mpitondra fanjakana sy manam-pahaizana hanao fanaraha-maso ny fiarovana ny zavamaniry!
Fako ho an'ny angovo
Manaova faritra amin'ny fiara Pallet
Fitaovana mitafy grama
Tongasoa ireo mpitondra fanjakana sy manam-pahaizana hanao fanaraha-maso ny fiarovana ny zavamaniry!
Tamin'ny 4 Jona 2021, ny mpitarika sy ny manampahaizana momba ny Birao Fanaraha-maso ny fiarovana ny governemanta dia nitsidika ny orinasanay mba hanao fitiliana fiarovana ny fitaovana famokarana sy ny toerana famokarana ny orinasanay.
Noho ny lozam-pifamoivoizana azo antoka tato ho ato dia mitranga matetika. Nanomboka nandray fepetra henjana ny governemanta manoloana an'io olana io. Ireo mpanamboatra fanodinana vy rehetra ato ho ato dia tsy maintsy mandalo fanaraha-maso sy fanaraha-maso feno momba ny fiarovana. Ireo mpanamboatra izay tsy mahomby amin'ny fizahana dia tsy maintsy ajanona ny famokarana ho fanitsiana ao anatin'ny iray volana. Raha tsy mahomby ny mpanamboatra ny fanitsiana, dia voatery hanidy izy.
Izay nojeren'izy ireo etsy ambany:
1. Madio ny ozinina sy ny atrikasa, malama ny làlana ary tsy misy solika sy rano amin'ny tany; Ny fitaovana sy ny fitaovana dia tokony hapetraka milamina, ary ny teboka fandidiana dia tokony hanana jiro ampy; Ny jiro sy ny rivotra dia mifanaraka amin'ny fepetra takiana; Tokony ho feno ny famantarana fampitandremana momba ny fiarovana.
2. Aza mampiasa ny fitaovana famokarana sy ny teknolojia nesorin'ny fanjakana; Fanaraha-maso tsy tapaka, fikojakojana ary fanarenana mba hiantohana ny fahasalamana;
3. Ny fanaraha-maso tsy tapaka ny fitaovana manokana sy ny fitaovana fiarovana ary ny fotodrafitrasa dia ahitana indrindra: (1) milina fanandratana sy ireo fitaovana fampiakarana manokana (2) kojakoja fiarovana sy fiarovana (3) kojakoja fiarovana an'ny sambo fanerena (4) Fantsom-pitaterana (5) Motor fiara ao anaty zavamaniry (6) ascenseur (7) Toeram-piarovana tselatra (8) Fitaovana sy fitaovana elektrika (8) Axle crane vy (vy).
4. Ny fitaovana elektrika sy ny tsipika dia mahafeno ny fepetra takian'ny tontolon'ny asa, mitombina ny enti-mavesatra, madio sy simba ny ao anatiny sy ivelan'ny kabinetran'ny herinaratra, azo atokisana ny fifandraisana amin'ny fifandraisana tsirairay ary tsy misy fatiantoka mandoro, ary ny fiarovana fiarovana lamba, grounding (aotra fifandraisana), fiarovana be loatra sy ny famoahana rano ary fepetra hafa dia feno sy mahomby.
5. Ny takelaka manarona na ny arofanina dia apetraka ho an'ny lavaka, hady, dobo ary fantsakana tsara ao amin'ny faritry ny zavamaniry, ary ny fiarovana dia tokony hapetraka akaikin'ny lampihazo miasa amin'ny haavony.
6. Ny faritra mihodina sy mihetsika amin'ny fitaovana dia arovana.
7. Ny efitrano fialan-tsasatra, ny efitrano fanovana ary ny lalan'ny mpandeha an-tongotra dia tsy hatsangana, ary ny entana mampidi-doza dia tsy hotehirizina ao anatin'ny velaran'ny fitaovam-pandrefesana vy sy vy mafana.
8. Ireo mpiasa mpanao mofo mafana amin'ny hafanana ambony dia mitafy fitaovam-piarovana manokana amin'ny hafanana sy ny famafazana; Aza mijanona ao amin'ilay faritra misy akora mora mirehitra sy mipoaka.
Fotoana fandefasana: Jun-05-2021
No.6 Jianghe Road, Jingjiang City, faritanin'i Jiangsu, Sina